GIS (Geographic Information System) na Linux: mmemme dị | Site na Linux
GIS (Geographic Information System) na Linux: mmemme dị
na GIS (Usoro ihe omuma banyere ala, Geographic Information System) kwere rụọ ọrụ na ozi ederede aha, na-ejikwa akwa vector, raster (bitmap) na ozi sitere na ọdụ data. Enwere ọtụtụ faịlụ maka GIS, ụfọdụ raster (dị ka GeoTIFF, DRG ma ọ bụ SID) na vektọ ndị ọzọ (dịka ESRI-Shapefile, GML, DXF, MapInfo File ma ọ bụ AJ)). Ya mere, ha dịkwa mmemme dị iche iche maka GIS; ka anyị hụ ụfọdụ n’ime ihe ndị kacha mkpa dị maka Linux.
Iji wụnye ha, ị ga-eme chọọ ha na njikwa ngwugwu nke distro gị ma ọ bụ budata onye nrụnye kwekọrọ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwaahịa a.
2 kwantum GIS
7 Ọba akwụkwọ Geospatial
gvSIG bụ ihe ngwanrọ na emepe emepe sọftụwia maka Geographic Information Systems, nke gụnyere gvSIG Desktop na ngwa gvSIG Mobile. gvSIG Desktọpụ bụ ngwa izizi emere n'ime ọrụ gvSIG, nke bụ ya kpatara akpọkwara ya gvSIG.
gvSIG Desktọpụ bụ mmemme kọmputa maka ijikwa ozi gbasara ala na nkọwapụta nke ihe osise kesara n'okpuru ikike GNU GPL v2. Na-enye ohere maka ozi vector na raster yana sava maapụ na-ezute nkọwa OGC. Nke a bụ otu n'ime njirimara njirimara gvSIG ma e jiri ya tụnyere Systems Geographic Ozi ndị ọzọ, mmejuputa dị mkpa nke ọrụ OGC: WMS (Ọrụ Maapụ Weebụ), WFS (Ọrụ Njirimara Weebụ), WCS (Ọrụ mkpuchi Web), Katalọgụ Ọrụ na Ọrụ nke Gazetteer .
E mepụtara ya na asụsụ mmemme Java, na-agba ọsọ na Microsoft Windows, Linux na Mac OS X sistemụ arụmọrụ, ma na-eji ọba akwụkwọ GIS mara ọkwa, dị ka Geotools ma ọ bụ Java Topology Suite (JTS). N'otu aka ahụ, gvSIG nwere asụsụ edemede na-adabere na Jython na mgbakwunye na Java nwekwara ike ịmepụta site na iji klas gvSIG.
N'ime usoro faịlụ eserese kachasị mara, ọ gụnyere, n'etiti ndị ọzọ, nnweta vector formats GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML na raster image formats dịka MrSID, GeoTIFF, ENVI ma ọ bụ ECW.
Quantum GIS (ma ọ bụ QGIS) bụ ihe mepere emepe Geographic Information System (GIS) maka GNU / Linux, Unix, Mac OS na Microsoft Windows nyiwe. Ọ bụ otu n'ime ọrụ asatọ OSGeo Foundation na asatọ na 2008 ọ gụsịrị akwụkwọ na nhazi oge. Ọ na-enye ohere ijikwa raster na vector formats, yana ọdụ data. Fọdụ n'ime njirimara ya bụ:
Nkwado maka mgbatị gbasara mgbasa ozi PostgreSQL, PostGIS.
Ijikwa nke vector faịlụ Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, GRASS GIS, wdg.
Nkwado maka ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke faịlụ raster (GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, wdg)
Otu n'ime uru kasịnụ dị na ya bụ ohere nke iji Quantum GIS dị ka GUI nke SIG GRASS, na-eji ike nyocha niile nke nke ikpeazụ na gburugburu ọrụ ọrụ enyi. Emepụtara QGIS na C ++, na-eji Qt n'ọbá akwụkwọ maka eserese Usernye njikwa ya.
Hapụ GIS Web
SAGA (English acronym for System for Automated Geoscientific Analyzes or System for Automated Geoscientific Analyzes in Spanish) bụ ngwanrọ ngwanrọ banyere ozi gbasara ala (lee Geographic Information Systems).
Ebumnuche mbụ nke SAGA bụ ịnye ikpo okwu dị mma ma dịkwa mfe maka ntinye nke usoro geoscientific site na mmemme mmemme ya (API). Nke abụọ abụrụ ime ka ụzọ ndị a dị mfe. Emezuru nke a site na njirimara njirimara ya (GUI). Otu, API na GUI bụ ezigbo ikike nke SAGA - usoro na-eto eto ngwa ngwa nke usoro geoscientific.
SAGA GIS weebụsaịtị
Dị ka akọwapụtara na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke GMT http://gmt.soest.hawaii.edu/, GMT, nke na-anọchi anya Ngwongwo nkewapụta Ngwaọrụ, ya bụ, Ngwaọrụ maka ịmịpụta Maapụ, bụ ngwungwu n'efu nke mmemme ngwanrọ mepere, nke mejupụtara 60 ederede 1, maka nkọwa nke data ala na, n'ozuzu, data na akụkụ abụọ na atọ, gụnyere algọridim maka nzacha, ntụgharị, ntanye, wdg. Nwere ike iwepụta ihe osise na faịlụ Postscript sitere na eserese atọ na-acha agba atọ. GMT nwere ike iweputa ihe dịka ụdị 30 nke ihu ala ma nwee ozi na faịlụ ya na osimiri, ụsọ oké osimiri na mba.
Anyị chọrọ naanị ọnụ ọgụgụ dị nta n'ime ha. GMT nwekwara ike ịgụ mpaghara, oke ala, osimiri, na ọdọ mmiri dị ka vektọ (ya bụ, dị ka akụkụ mgbakọ na mwepụ) ma ọ dabara ma ọ bụ n'ụzọ na-adabaghị adaba, site na ntụgharị, yana ọdụ data ama ama.
GMT enweghị interface onye ọrụ. Maka ọgbọ nke map, ị ga-eji onye ntụgharị okwu iwu (akara iwu) nke sistemụ arụmọrụ nke eji mmemme ahụ. Nke a bụ ebe a na-abanye iwu ndị nwere ikike ha ka ha wee nwee ike wepụta onyonyo PostScript, faịlụ yana ndọtị ps. Enwere ike ịtụgharị faịlụ Postcript na ụdị ndị ọzọ ma mesịa dezie ya na usoro ndezi ihe oyiyi. Maapụ ndị mepụtara ga-enwe akwụkwọ ikike n'okpuru akwụkwọ ikike GNU Free Documentation License.
GMT weebụ & Enyemaka Wikipedia
GRASS (English acronym for Geographic Resources Analysis Support System) bụ sọftụwia GIS (Geographic Information System) n'okpuru ikike GPL (sọftụwia na - akwụghị ụgwọ). Ọ nwere ike ịkwado ma raster na ozi vector ma nwee ngwaọrụ nhazi ihe oyiyi dijitalụ.
Na mbido ya, na 1982, United States Army Construction Engineering Laboratory Corps of Engineers (USA-CERL) mepụtara ngwanrọ ahụ dị ka ngwá ọrụ maka nlekọta na njikwa gburugburu ebe obibi nke mpaghara ndị dị n'okpuru nchịkwa nke Ngalaba Nchedo anaghị achọta ihe ọ bụla GIS n'ahịa na-egbo mkpa ndị a. N’afọ 1991, ndị mmadụ wepụtara ya n’ throughntanet. Ọ na-ewu ewu na mahadum, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ gọọmentị. Na 1997, na ọkwa USA-CERL GRASS na ọ ga-akwụsị ịkwado mmemme ahụ, Mahadum Baylor weghaara mmepe ya. Ka ọ dị ugbu a, nnabata ya n'ime ụwa agụmakwụkwọ na-abawanye. Na October 26, 1999 na mbipute 5.0 nke usoro ihe omume ka a tọhapụrụ n'okpuru ikikere GNU GPL. GRASS bụ otu n'ime ọrụ asatọ OSGeo Foundation. Na 2008, ọ gụsịrị akwụkwọ na nhazi oge.
Na Linux, ihe eserese eserese maka GRASS bụ Quantum GIS, nke a makwaara dị ka QGIS.
Gbanwee site na usoro GPX (ejiri na GPS) gaa n'ụdị ESRI-Shapefile (ejiri ya na GIS).
Ọba akwụkwọ Geospatial
Ozi ndi ozo banyere GIS na: OsGeo. I nwekwara ike inwe mmasị OpenStreetMap.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » GIS (Geographic Information System) na Linux: mmemme dị
Mana ezigbo ozi ọma nwanne m nwanyị na nwanne di nwanne bụ ndị na-amụ banyere mbara ala na oge ọ bụla m wetaara ha Okwu na Eziokwu nke Linux, ha bịara na GIS a ma ama na enweghị nkwekọ na Linux, na nke a na nke ahụ, nke bụ adịghị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe dị iche, n'agbanyeghị ugbu a enwere m arụmụka na ule iji wepu ha n'ụzọ nkasi obi windo ...
Anọ m na-ekiri ụfọdụ ihe ngosi abalị na okwu m rapaara.
Ma ọ bụghị ya, a na-emepụta ọtụtụ ozi maka ọtụtụ ọrụ na-arụpụta ihe.
Obu ihe dika Google Earth ??
Ndewo. Ejirila m Gvsig na kwantum. eziokwu bụ na ha na-akpali nnọọ mmasị ma dị ike ngwaọrụ. =)
Obere oke inwe anya nke ndi ozo ...
Abụchaghị. Ndị a bụ akụrụngwa dị ike karị maka iduzi cadastres, ọmụmụ ala na ọmụmụ mmiri, wdg.
Ka ọnwa nke iri na abụọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri na abụọ n’afọ 9 ka o jiri nkeji iri anọ na ise gafee elekere anọ nke ụtụtụ
<> dere, sị:
Dika ndi mmadu no na peeji a na-ekwu, ha bu ngwa oru maka ijikwa na idezi map, inwere ike iweputa uzo, isi ihe na onodu 3d oburu n’inwe nkwado zuru oke, inwere ike bulite ma budata eserese, akara, akara na ndi ozo site na sava.
Nwere ike jikọọ ya na Postrgres ma nwee mmelite data na ntanetị .. =)
Cheta na ụwa bụ ihe onyonyo na ikike n'ụdị ụfọdụ ị ga-enwerịrị ikikere iji ya, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ a na-akpọ OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) nke na-arụ ọrụ na nkà ihe ọmụma wiki.
Enwere m ike ịsị na ọ dị ka ụwa n'echiche na ọ nwere ọrụ yiri ya (akara akara, ihe oyiyi, akwa, wdg) mana nnukwu ihe dị iche bụ na ị nwere ike ịtọpụ sava gị na map gị, na-emegharị ya maka mkpa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Buru ụgbọ mmiri dijo
Ezigbo enyi na-abanye!
Kpọmkwem. Nhọrọ ọzọ na Google Maps bụ OpenStreetMap. Nhọrọ ọzọ kachasị mma na Google Earth bụ Marble (ọ bụ ezie na ọ bụ afọ ole na ole site na asọmpi ya).
Nke a bụ Moscov! Luckily, e nwere ndị ọzọ na ndị ọzọ free uzo ozo.
Ka ọnwa nke iri na abụọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri na abụọ n’afọ 10 ka o jiri nkeji iri anọ na ise gafee elekere anọ nke ụtụtụ
A Ezi usoro
Were: ngwa ngwa ohuru nke KDE chetara Mac OS X
Otu esi sọfụ n'enweghị nsogbu na netwọk Wi-Fi